Qedela Umhlahlandlela we-Bichon Poodle: Ama-5 Okufanele Ufunde Amaqiniso - Izinhlobo
Qedela Umhlahlandlela we-Bichon Poodle: Ama-5 Okufanele Ufunde Amaqiniso
Ngabe ubonile nje ibhere elihamba ngezinyawo uhamba ngenjabulo phansi komgwaqo?
Cishe usanda kubona iBichon Poodle ethandekayo.
Ubungako bazo obuncane, uboya obuphelele namehlo enkinobho kubenza babukeke befana ne-teddy bear kunenja.
Lezi zinja ezithandekayo zi-snuggly futhi zifuna ukuchitha isikhathi sabo esiningi zikulandela futhi zisondele kuwe.
Kulesi sihloko sizochaza konke okudingayo ngalolu hlobo ...
I-Bichon Poodle shazi
Ukubuka konke kweBichon Poodle
Ibiza malini iBichon Poodle?
Ukubukeka Kwezinja zeBichon Poodle
Umhlahlandlela Wokunakekelwa KweBichon Poodle
Ungayiqeqesha Kanjani I-Bichon Poodle Mix
AmaBichon Poodles izinja ezithandanayo ezinobuntu obuhle njengokubukeka kwazo.
IPochochon ingumxube phakathi kweBichon Frize nePoodle. Lezi zidlwane zihlotshiswe ngoboya obuphelele obenza zibukeke njenge-teddybear! Ziyi-bouncy zohlobo olunempilo futhi oluthanda ukudlala noma ukuhlekisa abanikazi bazo nganoma iyiphi indlela.
Ukuthandwa: # 43.
Isisindo: 6-17 amakhilogremu.
Intengo: $ 1000- $ 1500.
Ubuntu: Othandekayo, ophilayo futhi nomphakathi.
Intengo : $ 1000- $ 2000
Usayizi : 6-9 amakhilogremu
Intengo : $ 1000- $ 1500
Usayizi : 5-20 amakhilogremu
Umsebenzi : Ophakathi nendawo
Usayizi : 6-17 amakhilogremu
Umsebenzi : Ephansi / Ephakathi
IBichon Poodle iyisiphambano esiphakathi kweBichon Frize ebabazekayo nePoodle ehlakaniphile .
Le hybrid ithandwa kakhulu ngenxa yejazi labo le-hypoallergenic, uboya obuhle nobuntu obuphumayo.
Njengoba zincane kakhulu futhi zintekenteke ukwenza umsebenzi zigcinelwa ubungani kuphela. Bahle kakhulu kule ndima futhi futhi bazofuna ukugxambukela nawe nganoma yiliphi ithuba abalitholayo.
IBichon Poodles izinja eziphumayo ezithanda wonke umuntu ezihlangana naye.
Lezi zimvemvane zenhlalo uzwana kahle nezingane, abantu abadala abangashadile, imindeni emikhulu, abadala kanye nanoma yisiphi esinye isilwane abahlangana naso - bajabule nje ukuhlangana nabangane abasha!
Futhi ngubani ongeke afune ukuba nobungane nomdlwane omuhle kangaka?
Ama-curls abo amahle, amakhala amakhala kanye nosayizi omncane kubanikeza ukubonakala kwebhere eliphilayo. Kunzima ngokumangazayo ukumelana nokuthambisa enye yalezi zinja ezithandekayo, ngakho-ke ungathuki uma uhlala umiswa emphakathini ngabantu abacela ukuphulula injana yakho enhle.
Lezi zinja zinenqubo eyisicefe yokuzilungisa kodwa futhi zidinga ukunakekelwa okukhethekile ekudleni kwazo.
Kodwa-ke kukonke ziwuhlobo olulula ukunakekelwa futhi cishe noma ngubani angakwazi ukunakekela ngempumelelo eyodwa yalezi zinja ezincane ezimnandi.
Inobuhlakani futhi kulula ukuyiqeqesha.
Kuhle kakhulu ngezingane nezinye izilwane ezifuywayo.
Ingahlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana.
Yenzelwe izinkinga zamazinyo.
Yiba nesimiso esiqinile sokuzilungisa.
Ithambekele ekubeni yippy / barky.
Ukusa kwakho kuzoqala ngokuqabula okuningi njengoba iPochochon yakho enothando izokukhotha uvuke.
Le midlwane inamandla futhi inempilo ngakho-ke izolungela ukuhamba ekuseni kakhulu ukuthi ngabe ukulungele noma cha.
Njengoba uqhubeka ekuseni ulindele ukuthi iBichon Poodle yakho inanyathiselwe eceleni kwakho ngaso sonke isikhathi. Bazokwamukela ngenjabulo noma yikuphi ukunakwa obanikeza khona futhi bangahle bakhiphe ukukhonkotha okuncane uma bezwa ukuthi awubanaki.
Ukuhamba kwakho okufushane ekuseni cishe kuzobandakanya ukubingelela bonke omakhelwane bakho. Lezi zinja zomphakathi zidinga ukubingelela wonke umuntu azibonayo - ngakho-ke qiniseka ukuthi unesikhathi esanele sokusindisa lapho uhamba nomdlwane wakho ophumayo ohambweni.
Njengoba uqhubeka nosuku lwakho uyohlala unesithunzi esinemilenze emine. Lezi zinja azithandi ukushiywa zodwa ngakho-ke zizoba seduze ngangokunokwenzeka njalo ngeminithi elilodwa losuku. Uma ushiya bazokhalima, bakhale futhi bakhonkothe ​​uze ubuye.
Bazosebenzisa iningi losuku lwabo bedlala ngokujabulisayo namathoyizi ngaphakathi noma babuke umhlaba uphuma ngefasitela (inqobo nje uma kusavaliwe kuwe kunjalo).
Umfundi wakho uzofuna kuphela isikhathi esifushane sokudlala usuku ngalunye.
Bazofuna ukuphuma ekuhambeni okufishane okungu-2 usuku lonke futhi mhlawumbe bazocela ukudlala ukulanda egcekeni uma usuqedile ukusebenza.
Njengoba kufika kusihlwa bazofuna ngokulangazela isikhathi sokuhlala kusofa ngenkathi uthola amafilimu wakamuva.
Ekupheleni kosuku bazofuna ukusonga eceleni kwakho embhedeni futhi ngenjabulo bazokhipha balale, balungele ukuqala futhi kusasa.
I-Bichon Frize wuhlobo oludala kakhulu olusuka ohlotsheni lwenja olwaziwa nge-Bichon Tenerife. Lezi zinhlayiya kwakungezomndeni wezinhlobo zeBarbichon (okubandakanya neBolognese, iHavanese neMalta).
Lezi zinja ezikhangayo zitholakale eCanary Islands futhi ekugcineni zahamba zaya eYurophu ngekhulu le-13 lapho zaduma khona kakhulu emndenini wasebukhosini. Ekugcineni bathole indlela eya e-US lapho babonwa khona yi-AKC ngawo-1970. Kube yizinja ezithandwayo zombukiso nezinja zomndeni kusukela lapho.
Ngakolunye uhlangothi ama-Poodle akhuliswa eJalimane njengezinja zokuzingela ukuthola izinyoni zasemanzini. Lezi zidlwane zaduma kakhulu eFrance futhi zazalelwa osayizi abahlukahlukene njengeMiniature neToy Poodle. NjengeBichon Frize, iPoodle yadlulela e-US ngawo-19000 yabuye yaduma kakhulu.
Manje seziwuhlobo oludume kakhulu lokwenza izinja ezi-hybrid ngenxa ye- uboya babo be-hypoallergenic .
IBichon Poodles yakhiqizwa okokuqala ngasekupheleni kweminyaka yama-1990s e-Australia ngesikhathi sokuqala kwenkathi yenja yomklami.
Akuphelanga sikhathi esingakanani balibangisa e-US.
Ukusuka lapha ukuthandwa kwabo kukhule ngokushesha futhi manje banokulandela okubalulekile ngenxa yokubukeka kwabo okuhle nentelezi engenakuphikwa.
Le hybrid ihamba ngamagama amaningi kufaka phakathi iPochochon, iBichpoo, iBichon Poo nePochoch.
Imvamisa lokhu kuhlanganiswa kwenziwa ngokuwela iBichon Frize nethoyizi noma iPoodle encane. Kuyaqabukela kakhulu ukubona iBichon Poodle eyinzalo ye-Standard Poodle.
Izinhlobo ezincane zivame ukuba nezingulube ezincane kakhulu kodwa lolu hlobo lungaba nodoti ofika kumidlwane emi-5 - lolu udoti omkhulu kakhulu uma kuqhathaniswa nezinhlobo eziningi ezincane.
Imidlwane yesizukulwane sokuqala iBichon Poodle ijwayele ukuba nempilo enhle futhi izuze ifa elincane lezifo ezikhathaza iBichon Frises nePoodles. Kodwa-ke izizukulwane zesibili zivame ukungabi nempilo encane futhi zithole izifo eziningi kubazali bazo.
Ama-Poodle awuhlobo oludume kakhulu lokwenza amamiksi nawo. Abazalisi basebenzisa amaPoodle kaningi ngenxa yobuhlakani babo nokuchitheka okuphansi.
Ukuwela i-Bichon Frize ehloniphekile nePoodle enothando kudala enye ye izinhlobo ezimnandi kakhulu ezihlanganisiwe kukho konke.
IBichon Poodle yaziwa ngenhliziyo yabo yegolide.
Lezi zinja ezinhle zinikele ngokujulile kumalungu emindeni yazo futhi zifuna uthando ngaso sonke isikhathi. Bazokungena ngentshiseko emathangeni akho bese bekugeza ngokwanga ukukhombisa ukuthi bakuthanda kangakanani.
Isimo sabo sothando asigcini emndenini wabo. Lolu hlobo lunomusa kuwo wonke umuntu abahlangana naye futhi luthanda ukubingelela wonke umuntu abadlula kuye ekuhambeni.
Banothando olungenamibandela nenhliziyo ebonakala inkulu kunemizimba yabo emincane.
Ngoba bahlala befuna ukunakwa kubathandekayo babo abangakwenza thuthukisa ukukhathazeka ngokwehlukana futhi uzokhonkotha lapho besele bodwa. Ukuba nesinye isilwane endlini kuzosiza ekunciphiseni isizungu esedlulele lezi zinja ezibonakala zinaso.
Ngaphandle kwemizimba yabo emincane lezi zidlwane zinamandla amaningi.
Amandla abo aphuma ngokuqhuma okufishane ngakho-ke kujwayelekile kakhulu ukubabona bedlala umzuzu owodwa bese behla embhedeni olandelayo. Bazodlala bodwa, kepha kungcono badlale nawe.
Lemvelo enempilo iphuma ngempela lapho begxuma bezungeza ngemuva kwebhola noma bejaha igceke. Lezi zinja ezi-goofy zithanda ukuhlekisa abanikazi bazo ngakho-ke ungahle uzithole uhleka ama-antics kasomahlaya wakho omncane we-canine.
Yize kungenzeka angabi nokubukeka okusabisayo lezi zinjana zenza izimboni ezinkulu zokubuka ngoba zona izokhonkotha cishe noma yini - abantu abasha, ukulethwa kwamaloli, izimoto ezidlulayo noma imbokodo esihlahleni.
Banegxolo eliphakeme kakhulu elingakhathaza ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke lokhu kuziphatha okuzofuna ukukuqeqesha kusenesikhathi.
Kokubili iBichon Frize nePoodle kuyizinhlobo ezibizayo.
Ngenxa yalokhu iBichon Poodle iyinja ebizayo.
Lindela ukukhokha cishe u- $ 1500 ngomdlwane.
Udinga futhi ukubheka izindleko zokugcina lolu hlobo (ikakhulukazi izindleko zokuzilungisa). Lokhu kungabiza impela ngakho-ke qiniseka ukuthi unesabelomali sale nja.
Umdlwane $ 1000- $ 1500
Umuntu omdala $ 300- $ 500
Ukutholwa $ 75- $ 350
Thenga kuphela lolu hlobo uma unesikhathi nemali yokunikela esimisweni sabo sokuzilungisa. Ukuya njalo kusihlanza kungangeza ngokushesha okukhulu.
Gwema ukunika le nja ukudla komuntu noma okunye ukudla okunamafutha - lawa madlwane azuza isisindo kalula futhi ukukhuluphala ngokweqile kungaholela ekukhathazekeni okuningi kwezempilo.
Uma ungakujabuleli ukuhlangana nabanye abantu ngakho-ke lena akuyona inja yakho. Lezi zinja zizokuhudulela kubantu ongabazi ukuze zifune ukunakwa.
Ngenkathi le nja ibhekwa njenge-hypoallergenic asikho isiqinisekiso sokuthi ngeke ikhulise ukungezwani komzimba kwakho. Ngokufanelekile kufanele uhlangane nabo ngaphambi kokuba ubamukele ukuze uqiniseke ukuthi ukungezwani komzimba kwakho akuqubuki.
Kuzodingeka usebenzise imali ekwenziweni kwamazinyo noma ekwenziweni kwamazinyo ngalolu hlobo ngoba kaningi kulwa nempilo yabo yamazinyo.
Le nhlanganisela yaziwa kangcono ngeyabo ukubukeka kwe-teddy bear .
Ukumamatheka kwabo okuthelelanayo namehlo amnandi kungancibilikisa inhliziyo yomuntu.
IPooochon’s inemilenze emifushane nenenkani ethwala imizimba yabo emincane ecindezelwe. Banekhanda eliyindilinga elithandekayo namakhala amancane enkinobho.
Le yinja ehlala inokubukeka okujabulisayo okuzokujabulisa ngokushesha.
Lezi zidlwane ezincane zivame ukuba ngamasentimitha angu-9-15 ubude futhi zinesisindo esingu-6-17 amakhilogremu kuphela.
Benza izinja ezinkulu zethanga ngenxa yobukhulu bazo obuhlangene.
Imvamisa lezi zidlwane zingumbala oqinile njengokhilimu, i-tan, ibhilikosi, nsundu noma mhlophe.
Kodwa-ke ngezikhathi ezithile ungabathola benamaki amhlophe noma inhlanganisela yemibala ejazini labo.
Okumnyama nokumpunga kuncane kakhulu ukwahluka kwengubo kepha lo mbala uyavela njalo ngezikhathi ezithile. Ijazi labo lingenye yezinto ezikhumbuleka kakhulu.
Ama-Bichon Poodles ambozwe ngama-curls amancane alayishwe ngokuphelele.
Uboya babo bunobude obuphakathi kepha bubonakala bufushane ngenxa yobunono bezinwele zabo. Kuyintokozo ukufuya ngoba ama-curls awo athambile ngangokunokwenzeka.
Njengebhonasi eyengeziwe le midlwane ayivamile ukuchithwa futhi kubhekwa njenge-hypoallergenic .
Yize bengakhiphi kakhulu ingubo yabo ikude nokugcinwa okuphansi. Lezi zinja kufanele zilungiswe ngokucophelela ukuze zibukeke zizinhle kakhulu.
IBichon Poodle inesimiso esihle kakhulu sokuzilungisa.
Badinga ukuxubha njalo, ukugeza izinwele nokuzilungisa ukuze bahlale becocekile futhi bagcine uboya babo bungangeni kahle.
Lokhu kugcinwa kungaba yinselelo kwabanye abanikazi njengoba kuyisidina kancane.
Ukunakekelwa okukhethekile ekudleni kwabo nakho kuyadingeka ngoba lezi zinja ezincane zine- ukuthambekela okuphezulu kokuthola isisindo futhi ukhuluphele.
Konke lokhu kunakekelwa okuxubekile kulula kakhulu. Zinezidingo zokuzivocavoca eziphansi futhi ziyinzalo enempilo impela. Lolu hlobo luhle kakhulu kubanikazi bokuqala abanesabelomali nesikhathi sokuzibophezela enkambisweni yokuzilungisa ejwayelekile.
I-Bichon Frize Poodle Mix ithola amandla ayo ngokuqhuma okuncane usuku lonke.
Ngokushesha bazoba nempilo enhle futhi bazobhebheka ngenjabulo nxazonke kepha la mandla aqhuma ngokuvamile ahlala kuphela imizuzu engu-5-10.
Ngenxa yalokhu abadingi ukuzivocavoca umzimba usuku lonke.
Izindlela ezimbili noma ezintathu ezimfushane zizogcina le nja ijabule.
Bayakujabulela ukuphuma ngaphandle babone abangane babo kepha abanamandla okuhamba ibanga elide noma wokuqwala izintaba njengezinhlobo ezinkulu zezinja.
Lezi zinjana kufanele zihlale zihanjwa ngebhande. Ungasebenzisa i-harness ngalolu hlobo ngoba zingaminyaniswa kalula ngokudonsa kwe-leash.
Phakathi kokuhamba bazodinga imizuzu eyi-10-15 yesikhathi sokudlala.
Lokhu kungaba ukugijimela egcekeni, ukudlala ukulanda noma ukuvakashela inja kamakhelwane kamakhelwane. Bathanda ukudlala noma yimuphi umdlalo obafundisayo futhi badlale kakhulu ngesikhathi sokuqhuma kwamandla abo. Izingane nezinye izinja ezincane zizothanda imvelo yazo enempilo futhi zingadlala nazo ngenjabulo zize zikhathale. Cishe bazodinga ukulala ngemuva kweseshini yokudlala ethokozisayo.
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: 30-45 imizuzu.
Izinga lomsebenzi: 2/5.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ukulungisa iBichon Poodle kuyisici esinzima kakhulu sokubanakekela.
Ama-curls aqinile ale nja adinga ukunakwa okwengeziwe gwema ukumatanisa noma ukuhlangana .
Lezi zidlwane ezinhle kufanele zishaywe nsuku zonke ukuze zigcine uboya bazo bungekho amafindo kanye nemiphimbo. Ngenxa yobunono bejazi lazo kufanele uqiniseke ukuthi uzixubha lezi zinja ngobumnene - cabanga ukumanzisa uboya bazo ukwenza ukuxubha kube bushelelezi futhi kungabi buhlungu kangako.
Ngaphezu kwalokho la ma-pups azodinga ukuvakashela umkhwenyana njalo ngenyanga ukuze asike ama-curls awo ayigugu futhi alolongeke.
Ukuzilungisa akunakuxoxiswana ngalolu hlobo.
Ngaphandle kokunakwa okufanele ngumlungisi wezinja inja yakho kungenzeka ithuthukise ama-matts, noma ama-clumps of fur - lokhu kuzodonsa esikhunjeni sabo futhi kungaba buhlungu impela.
Impilo yamazinyo ibaluleke kakhulu kulezi zinja.
Izinja ezincane zithambekele ekuthuthukiseni izingqinamba zamazinyo njengesifo sezinsini noma ukubola kwamazinyo. Ngakho-ke kubalulekile ukuxubha amazinyo enja yakho usuku ngalunye. Uma bengeke bakudedele uxubhe amazinyo kufanele usebenzise ukuphathwa kwamazinyo ukugcina amazinyo we-pup yakho engenawo u-tartar.
Lezi zinja futhi zidinga ukunakekelwa okukhethekile emehlweni azo. Nsuku zonke uzodinga ukuthatha indwangu efudumele bese usula amehlo abo ukuze ugweme izisihla sezinyembezi ezeqile.
Lezi zinja ezincane zinomkhuba wokuthola isisindo ngokushesha!
Kubaluleke kakhulu ukuthi ubhekisise indlela abadla ngayo.
Akufanele bavunyelwe ukuba badle usuku lonke futhi kufanele unciphise ukudla kwabo kabili ngosuku.
Ungalindela ukuthi lokhu kuhlanganiswa kudle izinkomishi zokudla ezingaba ngu-1½ usuku ngalunye (kuya ngesisindo sabo kanye nezinga lomsebenzi) elingama-calories angama-500.
Bazokujabulela ukudla ukudla okomile okwenzelwe izinhlobo ezincane zezinja ezinamazinga amaphakathi wamandla.
Lolu hlobo lokudla ngokuvamile lunamafutha amancane nama-carbs ukugwema ukuzuza ngokweqile kwesisindo, kepha luzoba namaprotheni anele ukuxhasa indlela yabo yokuphila esebenzayo.
Njengabaningi izinhlobo ezihlanganisiwe lezi zinja zivame ukuba nempilo enhle.
Ukukhathazeka kwezempilo okuvame kakhulu ngalezi zingxube yiPatellar Luxation ne-hip dysplasia. Lezi zombili ziyakhathazeka ngenxa yemilenze yazo emifushane nenenkani.
Uma uzivocavoca njalo futhi uqinisekisa ukugcina isisindo sabo ngakho-ke lokhu kungasiza ukuvimbela lezi zimo.
Izinkinga zamehlo zingaphazamisa lolu hlobo. Banokuthambekela kokukhula i-cataract noma i-retritis atrophy engagcina iholele ekungaboni.
Lolu hlu lungabonakala lunzima kepha ungesabi.
Iningi lama-Bichon Poodles izinja ezinempilo kakhulu futhi ziphila impilo ende futhi enempilo.
Ukuthola i-puppy yakho ihlolwe ngokofuzo, ukuyigcina isisindo esinempilo, ukubanikeza ukuzivocavoca umzimba njalo nokuhlala phezu kokuvakashelwa kwezinja zenja yakho konke kungasiza ekuqinisekiseni impilo yomdlwane wakho omuhle.
Ihlala isikhathi esingakanani iBichon Poodle?
Njengezinye izinhlobo ezincane le nja inempilo ende impela.
IBichon Poodle imvamisa iphila iminyaka eyi-12-15 kanti eminye yaziwa ukuthi ifinyelela eminyakeni eyi-18.
Ama-Bichon Poodles kulula ukuwaqeqesha ngenxa yokuvumelana nokukhalipha komzali wabo wePoodle.
Lezi zinjana zilangazelela ukujabulisa futhi zithathe imiyalo ngokushesha okukhulu. Ngenxa yalokhu ungakwazi fundisa lolu hlobo lwamaqhinga amaningi .
Lokhu kuzogcina izingqondo zabo ezimatasa zigxile futhi kungenzeka kusize ekuqiniseni isibopho phakathi kwakho ne-pooch yakho.
Kubalulekile ukusebenzisa ukuqiniswa okuhle njalo lapho uqeqesha lolu hlobo. Lezi zinjana zithanda ukujabulisa abanikazi bazo ngakho-ke noma yiluphi uhlobo lwesijeziso noma ukuthethiswa kuzozicasula. Bayazwela kakhulu futhi abaphenduli kahle lapho begxekwa kanzima.
Lezi zidlwane ezihlakaniphile zidinga ukuba nokuzivocavoca kwengqondo okuningi kakhulu kunokwenyama. Ama-Bichon Poodles angaba nesithukuthezi uma engenakuphikiswa, ngakho-ke qiniseka ukuthi unezindlela eziningi zokusebenzisa ubuchopho babo obunamandla.
Izifundo zokushesha ezincane kungaba izindlela ezimnandi ngempela zokubopha inja yakho futhi usebenzise ingqondo yabo. Ungakha ama-mazes amancane ngamashubhu epulasitiki namatende ezingane. Lezi zinja ezincane zithanda imidlalo eyinselele kanjena futhi zizosebenza ngenjabulo ngokusebenzisa ama-mazes anzima. Amathoyizi endida nawo azosiza ukugcina lezi zinja zijabule lapho usuhambile noma zingakwazi ukuzinaka ezikufunayo.
Ukuzijabulisa lezi zinja ezithandekayo kungumoya.
Bazalelwa ukuba babe izimvemvane zomphakathi futhi bazwane nawo wonke umuntu abahlangana naye. Yize kukwi-genetics yabo ukuba nobungane nabanye, ukuzibandakanya kusenesikhathi kusabalulekile phakathi neminyaka yabo yokwakha ukuqinisekisa ukuxhumana okuhle nabanye njengoba bekhula.
Kungani ugobodla i-teddy bear ebusuku lapho ubambelela kumdlwane ofudumele obukeka ufana ncamashi?
IBichon Poodle iyinja enhle kunoma ngubani ofuna i- ukunakwa okufunayo i-pup .
Kulula ukunakekelwa nokuzivumelanisa kahle nanoma yiluphi uhlobo lwendlela yokuphila.
Ubuntu babo bokuzijabulisa bubenza bathandwe kakhulu ngabangane nabantu abangabazi ngoba bazobingelela ngentshiseko wonke umuntu abahlangana naye.
AmaBichon Poodles ngokungathandabuzeki ayathandeka futhi anobuntu obuhle kakhulu kunoma yiluphi uhlobo oluxubekile. Impela bazogcwalisa impilo yakho ngokugcwala injabulo nokumamatheka.
Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi uma unemibuzo mayelana nalolu hlobo olujabulisayo ...
Inja yeKangal: Umhlahlandlela Ophelele Wokuzala (Isimo, Isikhathi Sokuphila Namaqiniso)
lab border collie mix full full
Umngcele womalusi wase-Australia collie blue heeler mix
pitbull exutshwe ne-rottweiler
injana yami izosinda kangakanani uma isikhulile
uyenza kanjani ilebhu yesiliva
i-labrador ixutshwe ne-pitbull